Fikambanana Clair de lune : Nizara biskoitra 47 gony
Tafiditra hatrany ao anaty asa firotsahana an-tsitrapo hataon'ireo mpikambana ao amin'ny fikambanana Clair de Lune Madagascar dia nisy ny fanampiana ho an'ny manodidina nataon'izy ireo nanomboka ny 3 jolay lasa teo. Naterina isan-tokantrano
Miteraka fahatarana amin’ny fandraisana andraikitra hatramin’izay ny fanoratana ny marary eny amin’ny tobim-pahasalamana. Aorian’izay mantsy dia mbola alefa any amin’ny distrika sy faritra ny taratasy izay vao tonga any amin’ny minisitera. Lany fotoana be satria herinandro na tapa-bolana mihitsy izay vao voaray eny amin’ny minisitera ny taratasy ary misy fotoana aza efa tena mihombo sy mirongatra ny aretina izay vao tonga ny taratasy. Amin’izao fotoana izao dia nahazo teknolojia avo lenta ny minisitera vokatry ny fiaraha-miasa amin’ny OMS ka vantany vao mahazo ny vaovao ny eny anivon’ny ivontoeram-pitsaboana na ireny CSB ireny dia voarain’ny minisitera sahady izany ary afaka mandray andraikitra avy hatrany izy ireo, indrindra amin’ireo trangan’aretina mampiahiahy.